Shir u dhaxeeya DF iyo madaxda maamulada oo Muqdisho ka furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Shir u dhaxeeya DF iyo madaxda maamulada oo Muqdisho ka furmay
Shirkaan ayaa looga hadlayaa dhaqan gelinta heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashada.
MUQDISHO,Soomaaliya - Shir u dhaxeeya dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa ka furmay Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Macaaluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaya in madaxda maamulada qaarkood ay codsadeen in fursad loo siiyo xilliga la bilaabayo deegaan doorashada xildhibaanada maadaama mudanayaasha baarlamaanka haatan jiro uu waqtigooda gabaabsi marayo.
Gaba-gabada shirkaan ayaa waxaa laga soo saari doonaa qodobo ay isku raacsanyihiin madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee ku aaddan geeddi socodka doorashada.
Doorashada Soomaaliya ka dhaceysa oo sanadkan ah mid dadban ayaa waxaa saameyn muuqata ku yeelan doona dowlada goboleedyada dalka ka jira, waxaana la filayaa in la magacaabo guddi doorasho oo heer federaal iyo heer maamul goboleed.